Waa kuma taajirka uu Mareykanku doon doonayo ee hubka halista ah ka iibiyay Saadaam Xuseen? - BBC News Somali
25 Maajo 2019
Lahaanshaha sawirka FUNDACIÓN CARDOEN
Image caption Carlos Cardoen wuxuu waqtigiisa iyo hantidiisaba ku bixiyaa horumarinta gobolkiisa
Sawirro: Ciidamada Ciraaq oo sii galaya Mosul
Qabrigii Saddam Xuseen oo la burburiyay
Image caption Carlos Cardoen waddankiisa Chile kama uusan tagin muddo 26 sano ah
Image caption John Nixon.
Markii gacanta lagu dhigay madaxweynihii hore ee Ciraaq, waaxda sirdoonka Maraykan ee CIA waxay u baahatay khabiir haybtiisa xaqiijin kara oo su'aalo weydiin kara si xog looga helo. Qofkaas wuxuu ahaa John Nixon.
Kaalintiisa ayaa ahayd inuu xog waafi ah ka uruuriyo hogaamiyeyaasha dunida, oo uu taxliiliyo waxa madaxdaas adkaynaya, wuxuuna uga warramay barnaamijka BBC ee BBC's Victoria Derbyshire programme.
Image caption Godkii uu Saddan Xuseen ku dhuumanayay markii la qabtay
Waxaa jiray warar la isla dhex marayey xilligaas oo ah in Saddaam uu isbeddel xagga jirka ah ku dhacay, laakin Nixon oo CIA ka tegey 2011 wuxuu yiri " shaki iigama jiro inuu isaga yahay markii aan arkay".
"Markii aan hadalka ku billaabay wuxuu ii eegay sidii aan muuqaalkiisa ku arkay buug kiisa ah oo miiska xafiiska muddo sanooyin ah ii saarnaa" ayuu yiri.
Xabaal-wadareed laga helay Ciraaq
Image caption Markii Saddam Xuseen la qabtay ka dib
"Wuxuu ka mid ahaa dadka shaqsiyadoodu soo jiidashada leedahay ee aan la kulmay" ayuu yiri.
"su'aal kasta oo aan weydiiyo, mid kale ayuu iigu beddelayey" ayuu yiri. Arrinta ugu muhiimsan oo uu wax ka weydiinayey ayaa ahayd hubka aadka wax u gumaada, taasoo ahayd sababta ugu weyn ee Maraykanka iyo UK ay dagaalka ula galeen.
Image caption Sanadkii 2016-kii Saddam waxaa lagu helay in uu galay dambiyo aadanaha ka dhan ah
Hadalka caynkaas ah waxaa ku gacan sayray ra'iisul wasaarihii hore ee UK Tony Blair oo dalka hogaaminayey wakhtigii duullaanka la qaadayey.